Via-e-pad - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Nge eyandayo ka miniaturization imikhiqizo electronic futhi izicelo iphimbo amadivayisi zikanokusho,-VIAS zithandwe kakhulu ngoba kukhona i solution ngempumelelo obhekene uxhumano kagesi phakathi iminonjana kusukela izingqimba ezahlukene isiliphu wesifunda ibhodi. -VIAS kungenziwa labizwa zibe izinhlobo ezintathu eziyinhloko: Through-imbobo-VIAS, Blind-VIAS futhi-VIAS Buried, ngalinye elikwazi nokobana izimfanelo ezahlukene nemisebenzi iqhaza nokusebenza jikelele kahle PCB noma ngisho imikhiqizo electronic.
Via-e-pad (VIP) ubuchwepheshe ngokuyisisekelo zibhekisele enkulumweni ubuchwepheshe ngawo nge ibekwe ngokuqondile ngaphansi ingxenye contact pad, ikakhulukazi BGA pad nge zikanokusho iphimbo afanayo amaphakheji. Ngamanye amazwi, VIP ubuchwepheshe kuholela-VIAS kuhlinzwa noma efihlekile ngaphansi BGA pad, ezidinga ukuthi umkhiqizi PCB kufanele uxhume nge ne resin ngaphambi enifeza zethusi Plating phezu nge ukwenza kube engabonakali.
Kuqhathaniswa-VIAS angabaholi abayizimpumputhe e-VIAS wangcwatshwa, VIP ubuchwepheshe izici kokufaneleka ngaphezulu:
• Linganisa ngoba esihle iphimbo BGAs
• Eziya kwabantu ephakeme ka-PCB futhi uphromotha isikhala ekulondolozeni
• Ukwenza kangcono ukuphathwa ezishisayo, inenzuzo ukushabalalisa ukushisa
• kokunqoba izingqinamba ephezulu ijubane imiklamo efana inductance ongaphakeme
• Ukwabelana a surface flat nge okunamathiselwe ingxenye
• Ukwenza PCB izinyathelo ezincane futhi ewachitha okwengeziwe futhi kangcono
Ngenxa labo izinzuzo VIP ubuchwepheshe, nge e pad is kabanzi isicelo yabadobi PCB, ikakhulukazi labo ezidinga isikhala nomkhawulo BGAs futhi ugxile ukushisa ngokudlulisela futhi ngesivinini imiklamo. Ngakho-ke, nakuba izimpumputhe /-VIAS wangcwatshwa inenzuzo ukuminyana ngcono futhi PCB ingcebo ukonga, kuze kufike ukushisa ukuphathwa kanye nomklamo izakhi ngesivinini Sikhathazekile, nge e pad namanje lesikahle ngawe. Nge izindleko kubhekwe, amaphrojekthi ezahlukene eziholela izindleko ezahlukene. Ngakho uma kuhileleke-VIAS kuphrojekthi yakho kanti wena wehluleka ukucosha yiluphi uhlobo, xhumana nathi nge-imeyili wonderful@wonderfulpcb.com futhi abasebenzi bethu izokunikeza ikhambi elilungile.